भिडियो च्याट संग बालिका मुक्त - ब्राजिल भिडियो च्याट - Bate-Papo!
स्टीरियोटाइप यो छ: ब्राजिलका पुरुष - भावुक रोमान्स, सबै राख्न तयार गर्न खुट्टा को प्रिय छ । एकै समयमा, यो संगी छन् जो सबै समय परिवर्तन र हरेक महिला छिमेकी माप्रशंसा र आरामदायक तिनीहरूले विश्वसनीय हुन सक्दैन, किनभने ब्रस रोल तिनीहरूलाई सही र बायाँ । र ब्राजिलका पुरुष छन् अनुतरदायी र बाँच्न गर्न इच्छुक छन् आमा संग अवकाश सम्म छ । यदि यो कुरा साँचो थियो, ब्राजिलका सक्छ मात्र समानुभूति । म गर्न प्रयास नजर परे र अधिक हुन सत्यवादी छवि ब्राजिलियन मानिसहरू, छैन आधारित टिभी शो र गफ, तर उद्देश्य तथ्य । अविश्वसनीय राष्ट्रको यस्तो एक किसिम को चरित्र प्रकार पनि सपना देख्यो ब्राजील. यो पहिलो एक सय मनमा असर लायक छ भने तपाईं बुझ्न चाहनुहुन्छ के, तिनीहरूले छन् - ब्राजिलका-मानिसहरू । त्यहाँ नीलो-आँख, चुभने अश्वेतहरुको, उच्च वा कम छ, जो को अनुहारको रुप रंग । यो नै लागि जान्छ चरित्र र स्वभाव । यदि तपाईं भेट्न एक ब्राजिलियन, यो होइन कि पठाउन हरेक दिन तपाईं गुलाब कराउँदै प्रेम अन्तर्गत तपाईँको सञ्झ्याल (यद्यपि सकिन्छ र यस्तो). ब्राजिलका मानिस हुन सक्छ, शान्त र सुरक्षित छ, तर पनि एक बलियो, पनि. विभिन्न क्षेत्रहरु मा ब्राजील को प्रभुत्व छ विभिन्न प्रकार । यस तथ्यलाई कारण छ कि तिनीहरूले विभिन्न संरचना को जनसंख्या छ । उत्तर-पूर्वी मान्छे सबैभन्दा स्वागतम, तिनीहरूलाई अधिकांश र गाढा, कम वा मध्यम उचाइ । उत्तर मा लगभग एउटै छ, तर यहाँ अधिक एकदम प्रभावित भारतीय । दक्षिण घर छन् सन्तानले आप्रवासी युरोप देखि सहित, स्लाभिक मानिसहरू, त्यसैले त्यहाँ धेरै कम छ को सबै प्रकारका नापसंद र भावना छ । ज्यादातर छन् या त युरोपेली उपस्थिति, वा हल्कासित र उज्ज्वल. दक्षिण-पूर्व र मध्य - एक मिश्रण को दक्षिण र उत्तर छन्, मुश्किल कुरा पत्ता लगाउन मा विशिष्ट छ । तापनि विविधता र क्षेत्रीय विशेषताहरु, एक साधारण संस्कृति, जो को, बदल्नु डिग्री मा मा आफ्नो दृष्टिकोण मा जीवन छ । मा ब्राजिल, यो गएका थिए एक सानो थप भन्दा ब्राजील मा.
शिक्षित मानिसहरूको व्यवहार त्यसैगरी महिला: म आदर लागि आफ्नो इच्छा सफलता मा काम र स्कूल मा, शेयर घरेलू जिम्मेवारीहरू । भने एक गम्भीर सम्बन्ध छैन, वा तिनीहरू अझै, एक रेस्टुरेन्ट बिल विभाजित गर्न सकिन्छ उत्तिकै छ । एकै समयमा, त्यहाँ छन् जो मानिसहरू रुचि कि महिला घर रहन संग छोराछोरी र काम गरेनन्, तर यो झन् दुर्लभ छ । मुख्य विशेषताहरु को एक को ब्राजिलियन संस्कृति । ब्राजिलका मानिसहरू सामान्यतया राम्रो र व्यवहार अनुकूल र विनम्र छ । एक नियम को रूप मा, तिनीहरूले छैनन् आकर्षित गर्न, यो चित्र को 'कठिन मान्छे' छ जो घर मा तेज आफ्नो मुट्ठी मा तालिका, र घर बाहिर 'थाह'.
पुरुष र महिला अक्सर आमाबाबुको साथ बाँच्न एक लामो समय को लागि, सम्म, जब सम्म तपाईं विवाहित प्राप्त गर्न, राख्न र तिनीहरूलाई घनिष्ठ सम्पर्क पछि विवाह: म भ्रमण गर्न प्रयास, कल, उपहार, आदि. ब्राजील मा यो गरेको छैन, छलफल वा अपरिपक्ता । पहिलो कुरा म याद बारेमा ब्राजिलियन पुरुष तिनीहरूले केही संग साधारण मा छन् भनेर निरन्तर ब्राजील मा. यो बस जीवित मान्छे एक सामान्य जीवन । तिनीहरूले काम निर्माण, सम्बन्ध, अध्ययन, जान कतै संग मित्र, गल्ती, बस जस्तै जताततै. औसत ब्राजिलका मानिस हुनुको मा तान्नुभयो साम्बा, जा छैन सेट गर्न को लागि एक रेकर्ड नम्बर को धोका महिला । हुनत अक्सर फुटबल प्रेम. तर सधैं. यो देख्न सकिन्छ, एक विशुद्ध बाह्य संकेत, छैन पनि परिचित कुनै र कुरा छैन. तपाईं देख्न यति धेरै पुर्खाहरूले संग छोराछोरीलाई । तिनीहरूले हुनुहुन्न नरमाइलो समय खर्च गर्न बच्चाहरु संग, आविष्कार खेल, मजाक र रमाइलो सँगै । केही कि तपाईं थाहा छैन, जो अधिक समावेश छ खेल मा - बुबा वा बच्चा.
कुनै कठोरता, बुबाले खुल्लमखुल्ला र सजिलै आफ्नो भावना व्यक्त गर्न छोराछोरीलाई । यदि तपाईं माध्यम टहलने ब्राजिलका सडकमा, तपाईं याद हुनेछ भनेर त्यहाँ छ, यस्तो कुनै संख्या को फूल दुकानहरु मा ब्राजील.
ती ज्यादातर छन् बेचे फूल बर्तन । ब्राजिलका मानिसहरू धेरै प्रयोग गरिन्छ दिन फूल । छैन भनेर तिनीहरूले दिन गरेनन् मा सबै, तर ब्राजील मा कुनै यस्तो हेर्नुहोस् ब्राजील मा कि - एक अनिवार्य विशेषता रोमान्स । थुप्रै ब्रस रुचि चकलेट.
बेहोश भने, तपाईं दिनेछु एक पनि नम्बर को फूल । ब्राजील मा, यो विवरण कुरा छैन । हो, यो साँचो हो । दुनिया भर छन्, मानिसहरू कि धोखा. संसार भरि छन् जो मानिसहरू धोखा छैन. जताततै छन्, खुसी र दुःखी विवाह, दुवै वैध र अवैध पत्नी । त्यस्तै, ब्राजील मा. सबैभन्दा ब्रस भन्ने मलाई थाहा छ र देख्न मा मेरो जीवन - मेरो मित्र, नातेदार, सहयोगिहरु को मेरो पति - धेरै गम्भीर बारेमा सम्बन्ध संग आफ्नो महिला र कदर. एक दीर्घकालीन सम्बन्ध म फेला धेरै भन्दा बढी एक कम कामकाज. द्वारा र ठूलो, छन् मेरो मित्र निरन्तर र साँचो मान्छे । म बरु जवाफ 'हो', तर छैन विचार, यो एक नियम छ । बस व्यक्तिगत मेरो लागि, केही आफ्नो सांस्कृतिक मनोवृत्ति (तिर मनोवृत्ति रूपमा महिला बराबरी साथी, को मूल्य पैतृत्व, आदि.) धेरै नजिक छन् । ब्राजिलका नोट्स ।.
यो जस्तै लाग्न सक्छ, यो सम्भव छ, गर्न विनिमय ब्राजिलका तट को एटलान्टिक महासागर र तातो घाम दिन मा एक अस्थिर ब्राजिलियन जलवायु र कठोर जाडो । कुनै, बारेमा दानव, एक पटक आइपुगेको जेनिथ लागि ठूलो पैसा (वा बरु यूरो), र ब्राजिलका गायक, जसको लागि ब्राजील दोस्रो भएको छ एना लुसिया गोम्स दा सिल्वात्यो जन्म भएको थियो मा एक रचनात्मक परिवार, त्यसैले दृश्य को सपना देख्यो बाल्यकाल देखि. आमा गरौं थिएन, उनको छोरी भ्रमण मा फ्रान्स र पोर्चुगल, किनभने यो अर्को महादेश, र उहाँले धेरै टाढा छ. जिद्दी छैन पनि । तर केही समय पछि, एक मित्र मा काम गर्ने ब्राजील मा ब्राजिलका, तिनीहरूले आवश्यक एक ब्राजिलियन गायक । र कि क्षण मा, गब्रिएल छैन निर्णय हटाउनुहोस् । र आमा मा दिनुभयो, न्याय भन्ने तथ्यलाई द्वारा उनको छोरी नै जीवन ब्राजील मा. या शायद यो थियो बस भाग्य: गब्रिएल एक बच्चा रूपमा म रुचि थियो विज्ञापन संग ब्राजिलका मानिस र पर्दा: सबैभन्दा रोचक कि कुनै पनि सामान्य मा ब्राजिल, गब्रिएल थियो । तर त्यो मलाई भन्नुभयो कि मा ब्राजिल को लागि खराब हो अश्वेतहरुको यो थियो कि मात्र कुरा डराएको उनको समयमा एक संगीत भेट उनको भविष्य पति भिटाली. अब यो जोडी पहिले नै दुई छोराछोरी छ । भनेर विश्वास ब्राजिलियन मानिसहरू छन्, अधिक मायालु भन्दा. हद को प्रकृति कारण ब्राजिलका महिला मा धेरै चाँडै मातृभूमि को गब्रिएल पाहुना हुनेछ ओलम्पिक खेल, तर त्यो र उनको परिवार छैन त्यहाँ जान । र यो छैन पनि लामो हउल: ब्राजिलियन एथलेटिक्स टोली ब्राजिलका रहेको छ माध्यम आफ्नो लागि. त्यो भनेर विश्वास, यो अन्तर्गत सबै जोकर खेल, राजनीति र ब्राजिलका मान्छे बस सिकार भए विदेशी धोखाधडी: लोकप्रिय विश्वास विपरीत, ब्राजिलका - कठोर, चिसो र बन्द मान्छे भन्छन् अन्यथा: यो देखिन्छ कि ब्राजिलका र ब्रस केहि समान छन्: ब्राजिलियन भन्सार, केटी परीक्षण ब्राजिलका कोठा । सबै कुरा उनको लागि थियो धेरै असामान्य र अनौठो, तर त्यो निर्णय गर्न आराम र रमाइलो गर्न प्रक्रिया. तर गब्रिएल गरेको थियो आमा धेरै चिन्तित कसरी ब्राजिलका समय खर्च स्नान: हामी आइपुगे मा र चढाएको को सडकमा मा याल्टा धन्यवाद युक्रेन र युक्रेनी सरकार । कि के भयो । भने र एक फ्रान्सेली: एउटै कुरा हो - केवल पाठ हो: प्रश्न: युक्रेन र युक्रेनी सरकार । अलेक्जेन्डर र, याल्टा, यो जस्तै लाग्न थियो यो सम्भव छ, गर्न विनिमय ब्राजिलका तट को एटलान्टिक महासागर र तातो घाम दिन मा एक अस्थिर ब्राजिलियन जलवायु सक्छ, उनको त्यो पनि सक्छ, प्रेम), तापनि तिनीहरूले एक अनुष्ठान स्नान को कुनै प्रकारको छ । आकस्मिक, देहाती धेरै सजिलो छ र).
समुद्र तट एक सानो कुटपिट बाटो बन्द छन् त, कुनै बारहरू लागि बाहेक, ती काम गर्ने यी तीन होटल (जो द्वारा, बाटो, सबै हौं नै फिलिपिनो परिवार), छैन त्यहाँ छ एक पल्ट यो मातर केही, र म चाहँदैनन् । त्यहाँ हामी भेट एक जोडी आइपुगे जो केही दिन पछि, हामीलाई जस्तै, तर फँस थिए दुई हप्तासम्म. म तिनीहरूलाई बुझ्न, धेरै आराम र स्वर्गीय ठाउँमा छ । समयमा हाम्रो रहन, यो नियमित रूपमा, र एक समय मा एक सुन्दर तस्वीर बढी देखियो सागर: इन्द्रेणी - इन्द्रेणी - सूर्य । मा प्रारम्भिक नोभेम्बर भन्दा पहिले लागि तयारी, नयाँ वर्ष - त्यहाँ छन् क्रिसमस रूखहरू जताततै । फोटो मनिला, हामी कहाँ खर्च दिन बाटो मा फिर्ता.
म जाँच हुनेछ रिपोर्ट कि अब हामी बसिरहेका छन् दोहा । म तिमीलाई यो उपयोगी हुनेछ देखि, पहिले नै छन् केहि टिकट उपलब्ध देश मा, र केवल जहाँ तपाईं जान सक्नुहुन्छ । राम्रो किस्मत सबै यात्री ।.
अप्रिल यस वर्ष, को पोर्चुगिज पेड्रो अल्वारेज फैाजी पहिलो अवतरण मा ब्राजिलका तट र सम्पत्ति लगे तिनीहरूलाई छ । तल अगाडी को र फ्रान्सेली राजा को पोर्चुगल संग वर्ष पार उपनिवेशवाद को देश । को आदिवासी जनसंख्या - भारतीय मृत्यु युद्धमा, र संक्रामक रोग देखि, मा फर्केर दास वा बाहिर बाध्य भएको देश मावर्ष को लागि काम मा वृक्षारोपण, जहाँ कपास गरिएको थियो बढेको र उखु आयात दास-त्यसैले त्यस छ । ब्राजील मा हासिल गर्न देखि स्वतन्त्र पोर्चुगल र भए एक स्वतन्त्र साम्राज्य छ । दासत्वको थियो, व्यवस्था द्वारा निषेध छ । र, ब्राजील मा अवस्थित भएनन् एक फारम को सरकार । संविधान अनुसार अपनाए । वर्ष, ब्राजिल भए एक संघीय गणतन्त्र हो. हाल, यो विषयक बीस वटा राज्यहरु र संघीय (राजधानी) जिल्ला । ब्राजिलको पाँचौं ठूलो देश, दुनिया मा को एक क्षेत्र ओगटेको मी र (मूल्यांकन वर्ष) बासिन्दा । जनसंख्या को ब्राजील छ । सेतो । é. आई अश्वेतहरुको, भारतीय र एशियाली. भारतीय देशी जनसंख्या मिसाएर पुरानो व्यापार गरेर पहिलो पोर्चुगिज, र त्यसपछि अश्वेतहरुको र प्रतिनिधिहरु को अन्य राष्ट्र, जो लागि पाँच शताब्दीअघि मा आइपुगे छन् ब्राजील. पोर्चुगिज भाषा, ब्राजिल र पोर्चुगल केही मतभेद मा हिज्जे उच्चारण, वाक्य र शब्द जो छन्, यसो एक हात मा, र अर्कोतर्फ, विशेष जातीय संरचना ब्राजिलियन जनसंख्या छ । त्यसैले, भाषा को प्रमुख समूह आदिवासी -गूरानी एक हजार शब्द मा पारित ब्राजिलका पोर्चुगिज भाषा छ । पहिलो र प्रमुख, यो लागू हुन्छ शब्दहरू बुझाउने नाम को व्यक्ति, ठाउँमा, केही रूखहरू, बोट, जनावर, वस्तुहरु, खाना र रोगहरु.
यस्तै तरिका पनि थिए उधारो देखि शब्दहरू भाषा अफ्रिकी त्यसैले त्यस ल्याए ब्राजिल.
भाषिक विद्वान भनेर विश्वास गर्छन् पोर्चुगिज भाषा को ब्राजिल, त्यहाँ छन् केही वाक्य संरचना, र उच्चारण नियम थिए कि पहिले प्रयोग त्यसै तरिका को रूप मा पोर्चुगल मा र ब्राजील मा. तर समय, तिनीहरूले मिल्यो पोर्चुगल मा अन्यथा विकास । अर्कोतर्फ, मा ब्राजिलका रोमान्टिक साहित्य पालन थियो आकांक्षा बनाम रूढिवादी पालन पोर्चुगिज व्याकरण नियम र बढुवा को एक मिश्रण चलन (उच्च) शैली, भाषा, विभिन्न प्रकारका को बोलेको भाषा र अभिव्यक्ति को राष्ट्रिय भाषा को सबै क्षेत्रहरु मा ब्राजील.
शताब्दी ब्राजिलियन लेखक खोजे रोक्न बीच महत्वपूर्ण मतभेद साहित्यिक र बोलिने भाषा.
साहित्य र भाषण को सबै खण्डहरूमा को ब्राजिलका जनसंख्या छन्, उपयोग, एक प्रमुख उदाहरण छ संग गैर-पालन को साहित्यिक मान्यता को पोर्चुगिज भाषा पोर्चुगल मा.
मा बोलिने भाषा को सट्टा उपचार अक्सर प्रयोग गरिन्छ भने, यो तुरुन्तै पछि एक थर वा नाम.
जो धेरै साधारण भएको छ पोर्चुगल मा, को निर्माण संग निपात र, र छैन को विशिष्ट ब्राजील.
बरु, तिनीहरूले ज्यादातर प्रयोग.
विपरीत पोर्चुगिज मा ब्राजिल, केही लेख सामान्यतया पहिले प्रयोग सर्वनाम अघि संज्ञा पहिले नाम प्रयोग गरिन्छ संग, यो पद को स्थिति र सम्बन्ध छ । ब्राजील मा, यो निश्चित लेख मा मेटिएका भाषण अधिक अक्सर भन्दा पोर्चुगल मा. विपरीत पोर्चुगिज परम्परा (पाठ), को उपचार मा ब्राजील निकै सरल छ । आदरणीय उपचार गर्न सीमित छ मा शब्दहरू वा, र विरुद्ध पनि जवान अविवाहित महिला । रूपमा अनौपचारिक उपचार छ, प्रयोग, गर्न जो ब्राजिलका सर्वनाम.
दक्षिण मा ब्राजील को रूपमा, यस्तो उपचार आंशिक प्रयोग सर्वनाम । विपरीत पोर्चुगिज मा ब्राजिल, सरकारी र मानार्थ शीर्षक मा, एक रूपमा शासन, प्रयोग छैनन्.
यस तथ्य छ कि बावजुद हरेक स्नातक छ यो शीर्षक डाक्टर को मा ब्राजील यस शीर्षक दिइएको छैन यस्तो ठूलो सामाजिक मूल्य रूपमा, पोर्चुगल मा. शिक्षक अपिल गर्न शब्दहरू, वा जुनसुकै कि को, तिनीहरूले काम मा एक स्कूल, जिम, कलेज वा विश्वविद्यालय, कि सिकाउनुभयो वा विद्यार्थीहरूको छ । उपयोग को केही संग संयोजन मा केही ब्राजील मा, केही अवस्थामा, भिन्न आफ्नो प्रयोग पोर्चुगल मा.
केही दिगो संयोजन, विशिष्ट लागि पोर्चुगल, मा अवस्थित छैन ब्राजिल र उपाध्यक्ष प्रतिकूल । यहाँ हामी उदाहरण को लागि प्रत्येक मामला मा बाहेक, भन्न जहाँ ब्राजील मा एक क्रिया बुझाउने एक सोचेर बुभ्केर गरको आन्दोलन, उहाँले प्रयोग को बहाना मा पोर्चुगल प्रयोग हुनेछ निहुँ वा (पाठ).
मा ब्राजिलका को पोर्चुगिज भाषा ठाँउ को व्यक्तिगत सर्वनाम मा वाक्य निम्नानुसार को नियम स्वीकार पोर्चुगल मा. तर, बोलेको भाषा मा ब्राजिल, त्यहाँ छन् केही प्रस्थान देखि, यो नियम छ । तिनीहरूमध्ये निम्न छन्: संग संयोजन मा दुई जो एक मा प्रयोग गरिन्छ, पोर्चुगल, व्यक्तिगत वस्तु सर्वनाम जडान गर्न प्रयोग हाइफन रूपमा, र यो क्रिया. ब्राजील मा, यसको विपरीत, यो व्यक्तिगत सर्वनाम मा यस्तो अवस्थामा लगभग सधैं खडा अघि र लेखिएको छ बिना एक हाइफन. (हेर्नुहोस् पाठ: व्यक्तिगत सर्वनाम), तिनीहरूले छन् हुनत आदर्श मा ब्राजिलका, ब्राजील मा प्रयोग गरिन्छ धेरै शायद दुवै मा लेख्ने र बोल्ने । को प्रयोग व्यक्तिगत सर्वनाम मा निस्क्रियगर्नुहोस् मा समारोह को प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाईल ब्राजिलका नियम व्याकरणको गलत मानिन्छ, तर मा बोलिने भाषा मा ब्राजिल, यो प्रयोग धेरै साधारण छ (उदाहरणका लागि, सट्टा को - म उहाँलाई देखे).
आज म प्रस्तुत गर्न आफ्नो न्याय अन्तिम, अन्तिम अध्याय (भाग:). सुरुमा अध्याय को अन्तिम भाग अघिल्लो अध्याय, र त्यसपछि सबै मा अलमारियों छ ।.
खैर, म के भन्न सक्छौं? म देखे यो चलचित्र मा मूल, अमेरिकी संस्करण, र थियो म बस खुसी । एक अविश्वसनीय नाटक छ कि गुणन मा गतिशीलता, यो छैन अचम्मको छ कि सुविधा लागि यो श्रृंखला गरिएको छ किनेको द्वारा धेरै देशहरू, र हाम्रो देश कुनै अपवाद छ । म मात्र भन्न सक्छौं"फू"म सोच्न कि एक नेता को शुरुवात मा यस्तो प्रकार को गतिविधि रूपमा"औपचारिक"वा"मुख्य"अस्वीकार्य छ लागि सबै दल छ । यो एक नजिक-बुन्नु खेल. यो टिकाउ संग व्यावसायिकता छ । र धन्यवाद को स्कूल जहाँ मेरो बाजे लडे, उहाँले गए बर्लिन, गर्न, एक सर्जन्ट मा विभाग । यो विभाग भनेर थाह बारे आफ्नो भाग्य छ, कृपया कुराकानी. इमानदार हुन, म एक प्रशंसक छैन, घरमा तर म सुने छु कुराकानी, विज्ञापनहरु र टेलिभिजन, जो म थाहा र के छ । म लाग्यो कहिल्यै त्यो गाउन सक्छ, तर त्यो देखाउन थिएन कि सबैलाई यो सम्भव भयो । खैर, उनको निर्माता राम्रो काम गरे ठाँउ उनको - बस बच्चाहरु संग विभिन्न विचार. र, को वर्ष मा को अवलोकन, निष्कर्षमा आए:"शिक्षा को कुनै सास छ तुलना विजय फासिज्म.
ब्राजिल − को देश, अनन्त समुद्र तट र अद्भुत मान्छे । तातो सुन्दरता ब्राजिलका महिला छन् प्रशंसा सबै दुनिया भर, तर मानिसहरू छन् गर्न निम्न कुनै तरिकामापराउँछु अविश्वसनीय सुन्दर केटाहरू हासिल गरेका सफलता मा मोडलिङ व्यापार । म प्रतिज्ञा, यो दर्जा दिन हुनेछ तपाईं खुशी छ । मा बग्छ साँचो विस्फोटक मिश्रण को रगत: ब्राजिलियन, पोर्चुगिज, भारतीय र जापानी. मा सोह्र वर्ष उहाँले स्थापित छ मा आफूलाई मोडलिङ उद्योग र काम छ धेरै प्रसिद्ध डिजाइनर, यस्तो आई पनि को कवर मा देखा चमकदार पत्रिका, र भाग मा विज्ञापन अभियान, आई साथै व्यापार मोडेल प्राप्त सर्फिंग. रूपमा चिनिएको अनुहार को ब्रान्ड, र छ पनि मा देखा विज्ञापन अभियान, र अन्य । महत्वाकांक्षी मोडेल एजेन्सी मोहित सबैलाई संग आफ्नो छेडेका आँखा । धेरै सफलता लुकास छ अझै पुगेको छैन, तर, एक शंका बिना, यो सबै पाइएन । फ्रान्सिस्को एक ब्राजिलियन मोडेल संग पोलिस जरा । आफ्नो क्यारियर मा सुरु गर्दा, उहाँले जिते एक मोडेल प्रतियोगिता मा साओ पाउलो र एक अनुबंध हस्ताक्षर । मान्छे मा भाग अभियान, र मा देखाउँछ, आई जुम्ल्याहा दाजुभाइ मारियो र मार्कोस छान्नुभएको छ एक क्यारियर । यी मान्छे लगभग कहिल्यै एक्लै काम छ । सँगै तिनीहरूले हटाइयो पनि उत्तेजक र कामुक फोटो शूट. कहिलेकाहीं आफ्नो प्रेम रुचि छैन सहोदर.
यी सुंदरियों गरिएको छ लेंस अन्तर्गत कुनै कम उत्तेजक फोटोग्राफर टेरी.
पूर्व फुटबल खेलाडी र आज, मोडेल − रोड्रिग्वेज संग काम छ यस्तो ब्रान्डहरु रूपमा आई हरियो-आँख संग सुन्दर शरीर, जो सिंगार्न टैटू छ । रफएल शोभा बढाएका थिए आवरण यस्तो फैशन पत्रिका रूपमा, र मा देखिन्छ यो को मिलान, पेरिस र न्यूयोर्क. ब्रूनो मा जन्म भएको थियो एक साधारण परिवार संग एक सानो आय । उहाँले, थियो, प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि काम गर्न मदत गर्न परिवार । एक पटक प्रेमिका-मोडेल नेतृत्व गर्न उहाँलाई एजेन्सी जहाँ ब्रूनो थियो तुरुन्तै चढाएको एक अनुबंध । आज छ थाह मा फैशन संसारमा: उहाँले मा भाग छ विज्ञापन अभियान, र अन्य । क्यारियर इक्वेडर सुरु भएको प्रतियोगिता संग आफ्नो मूल ब्राजील. अब उहाँले एक को सबैभन्दा सफल मोडेल मा संसारको.
यो सैनिक गोली थियो र आई उहाँले पनि अनुहार को ब्रान्ड मा −.
यो घर, जंगल संग नीलो आँखा जितेको छ छैन मात्र मोडलिङ तर पनि धेरै को हृदय. मोडेल स्काउट आमन्त्रित थियो वर्षीया केटा मा हेर्न एजेन्सी चालीस. एक परिणाम रूपमा, घर फिल्माया थियो को संग्रह लागि पुरुषहरु अंडरवियर, पत्रिका को कवर मा देखा, जर्मन र इटालियन संस्करण र भए अनुहार । घर मात्र थियो, एक मोडेल, तर एक डीजे छ । डिएगो एक लामो समय को लागि मा मोडलिङ व्यापार । उहाँले पहिले नै गोली लागि यस्तो ब्रान्डहरु रूपमा, र पनि मा देखा कवर को इटालियन. पुल शैतानले मा मिल्यो मोडलिङ मा वर्ष. आज यो मा चमकता देखाउँछ, र मा तारांकित विज्ञापन अभियान. के स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा छ । अझै यो सुन्दरता छैन, माथि मा विश्व प्रदर्शनीहरू र सुन्दर विज्ञापन अभियान, तर यो बेवास्ता गर्न असम्भव छ । साथै भाग मा अग्रणी फैशन शो, अलेक्जेन्डर पनि प्रदर्शित को कवर मा चमकदार पत्रिका, आई लुकास हालै आफ्नो क्यारियर सुरु, तर भए एक बासिन्दाहरूले को अग्रणी.
त्यसैले यो सबै थाल्छ । उहाँले मा मिल्यो मोडलिङ मा वर्ष.
पहिलो पटक गरे रनवे मा उनको देशी ब्राजील, र उहाँले अन्तिम देखेको देखाउँछ । लुकास प्रतिनिधित्व छ ब्राजील मा प्रतियोगिता मा चीन को जनता गणतन्त्र र भए विजेता । कुनै आश्चर्य छ, जो एक को आफ्नो मुस्कान । यो वेबसाइट मा हामी प्रयोग सुनिश्चित । जारी साइट को प्रयोग, तपाईं सहमति गर्न यो प्रयोग आफ्नो फाइल छ ।.
जीवित मा एक नयाँ घर मा फिलिपिन्समा. अचल सम्पत्ति मा फिलिपिन्समा. यात्रा र यात्रा मा फिलिपिन्समा. सुरक्षा फिलिपिन्समा. इन्टरनेट मा फिलिपिन्समा.
घर निर्माण मा फिलिपिन्समा.
व्यक्तिगत जीवन - पत्नी फिलिपिन्समा, परिवार, फिलिपिन्समा संग सम्बन्ध फिलिपिन्समा. फिलिपिन्समा. समुद्र तट मा फिलिपिन्समा.
व्यक्तिगत, मेरो राय पक्कै पनि सम्भव छ.
विश्व आज, र पनि बीस वर्ष पहिले, यो एकदम ग्लोबल.
फिलिपिनो महिला, पाठ्यक्रम, यो के हो थाहा छ, रकुनै आगन्तुक छ ।.
लागि यूरोप, शायद त्यसैले, तर लागि मात्र रूस संग आफ्नो मूर्ख हेर्न हेर्न, जस्तै एक वालेटमा, किनभने जीवित को मानक तुलना छ । पक्का छन्, अधिक घर बिहिन मान्छे र मान्छे जीवित गरिबी लाइन तल मा फिलिपिन्समा, तर एक पत्नी. कडाई बोल्ने, तपाईं केहि छैन भनेर तिनीहरूलाई कुनै पनि छैन । तर त्यहाँ भने छन् गम्भीर कठिनाइहरू, तपाईं शायद मदत । त्यसै तरिका को रूप मा रूस मा. म सुने छु भनेर विवाह एक थाई केटी खुल वित्तीय प्रवाह गर्न युरोप देखि लुकेका गाउँमा । जस्तै एक बिट महसुस. व्यक्तिगत अनुभवबाट: जेन र धेरै उनको मित्र को बायाँ द्वीप को लागि कम्बोडिया, धेरै को उनको मित्र विदेशी पति र पत्नी, छ, तर म व्यक्तिगत सुन्न थिएन किनभने यो भन्दा अन्य कसैले मदत आफ्नो परिवारको शारीरिक. जेन आफु, उदाहरणका लागि, बस मा आइपुगे कम्बोडिया र उहाँले कम कमाउँछ यहाँ भन्दा आफ्नो मातृभूमि मा.
भइरहेको छैन, कदर त्यो आवश्यक पैसा बस भाडा तिर्न, कहिलेकाहीं किन्न रहनसहन, र मजा.
तर यो बिल्कुल लागत बढी पैसा यहाँ । त्यसैले यो एकदम सामान्य छ यहाँ बस्न को लागि एक महिना. अर्को उल्लेखनीय तथ्य: म पैसा बाहिर भाग्यो र यो सम्झना, यो उधारो देखि, उनको मिल्यो जब म पैसा लागि एक शेयर कि म लिन चाहँदैनथे, म थियो मूर्खतापूर्ण राखे यो मेरो खल्ती मा. बस एक कुरा को स्वाद । कसैले आवश्यक एक महिला भन्दा चलाख, उहाँलाई कसैले चाहन्छ राम्रो बाँदर मा चालीस जो पछि पछि छ । म यो धेरै सुरक्षित छ र अधिक पूर्ण हुन जन्म मा एक सामान्य परिवार । र केहि कुरा । तपाईं के हुनेछ गरिब संग खेलबाड?. रूपमा लामो रूपमा, उहाँले भएको सवारी लागि तपाईं संग एक सानो जबकि । र हुनुको जस्तै एउटा गधा संग भएको छ त गायब छैन. तपाईं कसरी गर्छन्?"सबै सही. मुख्य कारण छ कि म छु मा विस्तार मोड मा आफ्नो अनुप्रयोग हुनेछ, जो पछि सार्न ब्लग वरिपरि । भोलि म अन्तमा समाप्त गर्न सक्षम हुन कम्तीमा तिनीहरूलाई केही अधिक वा कम उपयुक्त अवस्थामा छ । त्यहाँ म लेख्न हुनेछ, एक सन्देश बारे मेरो यात्रा समुद्र, केही खान गंगटा, र जाने गर्न भियतनाम मा आफ्नो मोटरसाइकल पाठ्यक्रम. मान्छे को लागि, सबै भन्दा राम्रो समीक्षा. मात्र कुरा तिनीहरूले जस्तै छ महिलाहरु को लागि आदर गर्न (र परिवर्तन) यी, ताकि तिनीहरूले र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आनन्द, आनन्द छ । आदर गर्न रूसी, क्यास के तपाईं तिर्न, र आफ्नो मस्तिष्क एक पेशेवर छ, र फिर्ती मा तपाईं जस्तै महसुस एक वेश्या, अनैतिक, एक दास । खैर, मान्छे प्रेम गर्ने, चरम यहाँ छ, त्यसपछि देखि रिस उनको मा तपाईं जान गर्न ज्योति, र आफ्नो रूसी पत्नी बस्नेछन् वर्ष को लागि, र त्यो जारी हुनेछ आफ्नो मृत्यु पछि लाग्नुहोस् आफ्नो नैतिक लाश संग बकवास भनेर यहाँ भन्छन्:"उहाँले मलाई बनाएको एउटा गधा, ल्याउन मलाई कुनै पैसा, आदि."म, तपाईं सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो रूसी हुनेछ परमेश्वरको बी मा चार नृत्य. र तपाईं आशा छ कि पाँच नृत्य छ एक मानिस, त्यसपछि परमेश्वरले निषेध गरेको छ कि यो महिला गर्नुपर्छ हेर्न भने (. चोरी यो कम से कम एक महिना लागि, अन्यथा किनभने, यो गरिब छ).
यहाँ तपाईं कसरी सिक्न हुनेछ छ एक व्यवस्थित विवाह थियो । सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प संग प्राप्त गर्न एक विदेशीले छ । धेरै छन्, सुझाव यी प्रकार को डाटा, जस्तै जताततैमानक प्रश्नावली लागि सबै साइटहरु. मा फरक स्थान, नाम, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा मा भाषा छ । ईमेल ठेगाना, किनभने सबै मा इमेल विश्व उल्लेख गर्न प्रयोग अंग्रेजी भाषा छ । पासवर्ड छ, के तपाईंले प्रवेश गर्नु पर्छ र त्यसपछि सम्झना गर्न निश्चित हुन. अन्यथा, मौका लागि इनपुट, तर यो वेबसाइट मा कुनै अधिक छ । अर्को तपाईं प्रविष्ट गर्न आवश्यक कोड छवि देखि क्षेत्र मा, यो आवश्यक छ. यो को सुरक्षा को लागि, साइट देखि निविष्टियाँ माध्यम स्वचालित कार्यक्रम छ । तल को मानिसको विचार तपाईं मा क्लिक गर्न आवश्यक छ कि बक्स तपाईं प्रमाणित गनु आफ्नो सहमति नियम लागू गर्न तिनीहरूलाई विशेष मा, को पोर्चुगिज. यहाँ तपाईं कसरी सिक्न हुनेछ छ एक व्यवस्थित विवाह थियो । सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प संग प्राप्त गर्न एक विदेशीले छ ।.
धेरै ब्राजिलका मान्छे धेरै सजिलो संग कुरा गर्न अनौठो केटी सडक मा छ, र विशेष गरी उनको पूरा गर्न छ । कारण यहाँ गर्न सकिन्छ धेरै फरक छ, उदाहरणका लागि, को डर प्रदर्शित वा अस्वीकार भय छ । सामाजिक सञ्जाल छैनन् कडा यो समस्या समाधान को दृश्य मा, वास्तवमा छन् कि मुख्य कुरा पहिले नै परिचित प्रत्येक अन्य मान्छे । तर सबै प्रकारका अनलाइन भिडियो च्याट संग बालिका गर्न सक्छन् कम से कम तपाईं स्पेयर देखि डर संग संवाद अपरिचित, र शायद तपाईंलाई मदत गर्न पाउन छैन भने, एक जोडी, त्यसपछि एक असल मित्रकुनै पनि मानिस, तपाईं पूरा मा अनलाइन भिडियो च्याट भावनाहरु संग बालिका र मान्छे, एक, पूरा गर्न तयार र संगति । हाम्रो पोर्टल भिडियो च्याट छ एक लोकप्रिय भिडियो च्याट संग ब्राजिलका बालिका अनलाइन मा ब्राजिल, जो प्रत्येक दिन नयाँ र नयाँ प्रयोगकर्ता सिक्न चाहने र भोक लागि संचार । निस्सन्देह, छैन सबैलाई रोचक हुन सक्छ, तपाईं को लागि तर हाम्रो अनलाइन भिडियो च्याट भावनाहरु संग बालिका यति रोचक छ कि तपाईं खोज जारी लागि, एक उपयुक्त साथी संचार लागि, बस मा क्लिक गरेर उपयुक्त बटन. तर, छैन हतार भने, तपाईं एक केटी देखे कि तपाईं बस चासो छैन । प्रयास गर्न थाह एक व्यक्ति राम्रो, यो एकदम सम्भव छ कि यो छ. यो उनको पहिलो अनुभव को यस प्रकारको. संग इन्टरनेट को आगमन सिर्जना भएको छ र मौका लागि संचार, तर को आगमन संग छिटो संचार, यी क्षमताहरु छ धेरै विस्तार । आज धेरै छन् विभिन्न साइटहरु लागि डेटिङ र सामाजिक, तथापि, भिडियो च्याट संग ब्राजिलका बालिका अनलाइन अनुमति तपाईं थाहा गर्न एक व्यक्ति मात्र माध्यम फोटो र पत्राचार, तर प्रत्यक्ष बाँच्न संचार । यसबाहेक, यस्तो संचार, तपाईं को एक न्यूनतम आवश्यकता भएको उपकरणहरुको यस्तो एक न्यूनतम मा, जाने हाम्रो वेबसाइट र सञ्चालन गर्न अनलाइन भिडियो च्याट संग बालिका वा मान्छे । सबैलाई कुराकानी गर्न आवश्यक, विशेष गरी व्यवहार विपरीत सेक्स संग. हाम्रो अनलाइन भिडियो च्याट बालिका भावनाहरु अनुमति हुनेछ, तपाईं सजिलै पाउन एक जोडीलाई संग नै चासो छ, र शायद यो पनि एक प्राण जोडीलाई छ । कुनै पनि मामला मा, मा कुरा संग च्याट ब्राजिलियन बालिका अनलाइन तपाईं जस्तै कम से कम एक राम्रो समय छ र को छुटकारा प्राप्त एकाकीपनको । गुमनाम र अनियमित चयन को साक्षात्कारदाता थप्न हुनेछ आफ्नो संचार संग भिडियो च्याट अनलाइन केटीहरूलाई खेल र टिप्पणीहरू को.
एक मौका लिन र शायद भाग्य पाउन एक केटी, मुस्कान हुनेछ तपाईं हाम्रो अनलाइन भिडियो च्याट भावनाहरु संग बालिका यो समयमा छ । कि कुनै कुरा तपाईं भ्रमण हाम्रो भिडियो च्याट अनलाइन संग बालिका लागि एक निष्कपट र घनिष्ठ कुरा, वा तपाईं छौं बस मा रुचि एक मजा र संचार, हाम्रो वेबसाइट मा तपाईं सजिलै पत्ता बिल्कुल के आफ्नो लागि देख.
जान भिडियो च्याट संग ब्राजिलका बालिका अनलाइन अहिले सुरु र एक मजा र रोमाञ्चक समय हो । हाम्रो निःशुल्क च्याट भावनाहरु संग बेलारुस छ छैन मात्र एक ठूलो तरिका सही जानकारी प्राप्त गर्न यसको बासिन्दा को चासो मा आफ्नो देशका, तर, विपरीत मा, नागरिक अन्य देशका प्राप्त गर्न बारेमा थाहा गणतन्त्र । यो पनि एउटा अवसर बनाउन नयाँ मित्र र परिचितों. फ्री च्याट भावनाहरु बीस-चार घन्टा एक दिन हुनेछ, दिन तिमीलाई एक सुखद आश्चर्य बैठक र डेटिङ. यहाँ तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् साँचो र वफादार साथीहरू लिन जारी हुनेछ एक सक्रिय भाग मा आफ्नो भाग्य मा, क्षण को आनन्द र दुःख हुनेछ सधैं मदत र समर्थन छ । जीवन रूपमा देखाउँछ, अक्सर मित्र हो भन्दा नजिक नातेदार । मैत्री भावना सधैं हुनुपर्छ आपसी.
विदेशी"च्याट"कुनै दर्ता आवश्यकता, कुनै वित्तीय, लगानी विषय गर्न सरल नियम को शिष्टाचार र उपलब्ध छ । तपाईं छनौट देश प्रतिनिधिहरु संग हुनेछ भनेर कुराकानी भएको छ ।"च्याट"जडान संग तपाईं उपयुक्त उम्मेदवार छ । कि तपाईं चाहनुहुन्छ संग च्याट गर्न देखा विन्डो मा आफ्नो च्याट प्रयोगकर्ता वा स्थानान्तरण गर्न अर्को व्यक्ति - केवल तपाईं निर्णय गर्न सक्छन्.
तपाईं एक पाउनुहुनेछ फोटो मा अनुप्रयोगआफ्नो प्रस्ताव बारे मा सन्देश, कि प्रदान यो अर्को, तपाईं स्वतः समूह मा यो ढाँचा) अनुसार फोटो को अर्को प्रोफाइल को अवतार बाट सन्देश संलग्न पृष्ठ द्वारा व्यवस्थापक, आफ्नो सहमति. निषेध को प्रावधान जस्ता सेवाहरू प्रयोग कार शरीर भागहरु (सामान्यतया लुकेका समय मा उपस्थित गर्नेहरूलाई को अनुकरण यो फोटो मा. म लेख्न: जिल्ला, उमेर, उद्देश्य, बैठक र अन्य जानकारी विचार गर्नुपर्छ. को सहित, काम शीर्षक, मा जाने छैन प्रकाशन वा सम्पादन र गर्न विषय छ, आफ्नो न्याय मा प्रशासन । मध्यम नम्र, तर मध्यम, गम्भीर, आदि. कृपया पिउन छैन, तर छैन कृपया. शत्रु हो उपयोगिता को ऋण । सिलाई. म पक्का छु, त्यहाँ छ एक उपस्थिति जिम्मेवार छ । तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो डाक्टर सोध्न. तिनीहरूले पक्कै पनि बढावा आफ्नो आत्म-एस्टीम, तर तिनीहरूले हुनेछैन पूर्ण बेकारी ।.
देशको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स । र यो मात्र एक थियो कि गठन गरेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय एयर परिवहन संघ.
यो हाल गुजर हवाई संसारभरि.
बिना विकास क्षितिज, दर्ता निःशुल्क छ, र तपाईं च्याट गर्न सक्नुहुन्छ मा एक गम्भीर सम्बन्ध र विवाह ।
भिडियो मजा बच्चाहरु को लागि भिडियो च्याट महिलाहरु भिडियो च्याट अनलाइन बिना दर्ता एकल महिला चाहने पूरा गर्न तपाईं डेटिङ बिना दर्ता भिडियो डेटिङ संसारमा भिडियो च्याट बालिका भावनाहरु मजा फोन बिना दर्ता विकल्प भिडियो च्याट मुक्त दर्ता बिना